3D Touch, tonga amin'ny iOS 9 | Vaovao IPhone
Naverinay io ad nauseam io: ny iOS 9 dia rafitra fiasa hifantoka amin'ny fanamafisana sy ny fanamboarana bibikely, izay tsy misy vaovao firy. Ary tampoka dia mandeha i Apple ary mampiseho amintsika ny 3D Touch. Ity fikasohana Force vaovao ity dia revolisiona iray amin'ny fomba hifandraisantsika amin'ny iOS 9, ary goavana ny fahafaha-manolotra ny mpandraharaha. Inona no atao hoe 3D Touch? Inona no hataony? Holazainay aminao eto ambany izany.
1 Ny revolisiona ao ambadiky ny Multi-Touch
2 Midira fa tsy mila miditra
3 Fametahana ny hetsika matetika
4 Safidy fanampiny
5 Ary mbola misy bebe kokoa
Ny revolisiona ao ambadiky ny Multi-Touch
Rehefa natolotr'i Apple ny iPhone voalohany dia nasehony anay ny Multi-Touch. Sambany ny efijery iray dia afaka nahatsikaritra ny tsindry tamin'ny rantsantanana roa, na ny telo, na hatramin'ny rantsantanana dimy aza. Efa nahazatra antsika ny nanao fihetsiketsehana multitouch, indrindra amin'ny iPad, izay ahafahantsika mikatona ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fanatonana ireo rantsantanana dimy. Manomboka izao dia tsy ho fantatsika fotsiny hoe aiza no tsindrio, fa koa tsy maintsy mifehy ny hery anaovantsika azy koa isika.
Mba hanazavana azy tsara kokoa Apple dia mampiasa teny vaovao roa: Peek sy Pop. Rehefa manery kely ny efijery isika dia hijery, ary rehefa manindry mafy kokoa isika dia hanao Pop. Ireo anarana ireo dia tsy fahanginan'i Apple, fa mamaly bebe kokoa na tsia amin'ny asan'ny gazety tsirairay. Rehefa mitsikilo isika (manindry moramora) dia hahita topy maso ny zavatra tsindriantsika (peek amin'ny teny Anglisy ny mijery), ary rehefa manao Pop (tsindrio mafy kokoa) isika dia hiditra ao anatin'io atiny io (manondro ny teny hoe pop amin'ny teny anglisy koa). Amin'ny ankapobeny, afaka miteny isika fa izany no misy ny 3D Touch, saingy misy maro hafa.
Midira fa tsy mila miditra
¿Te hahita ny atin'ny mailaka ianao nefa tsy mila mampiditra azy? Avy eo manao Peek. Te hanokatra azy ve ianao? Tsindrio somary mafimafy kokoa ary ataovy Pop ary hiditra ianao. Toy izany koa no azo ampiharina amin'ny rohy: Manopy maso hijerena ny pejin-tranonkala, Pop hanokatra azy io amin'ny Safari. Sary, tari-dàlana amin'ny sari-tany ... Tsindrio kely mba hijerena, tsindrio bebe kokoa hanokatra. Fomba vaovao hidirana amin'ny zavatra nefa tsy mila mahafoy ny zavatra ataontsika.
Fametahana ny hetsika matetika
Saingy araka ny efa nolazainay, tsy mijanona amin'izany fotsiny izy ireo. Satria afaka manao hetsika amin'ny solaitrabe isika. Tsy ilaina intsony ny mampiditra rindranasa hanao zavatra, fa noho io 3D Touch vaovao io dia vitantsika ny manao azy amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ilay kisary fampiharana. Ny fandefasana hafatra amin'ireo mpifandray mahazatra anao, ny fidirana mivantana amin'ny fakan-tsarimihetsika na ny fitehirizana toerana dia tsotra sy haingana toy ny fanindriana ny kisary mifanaraka aminy ary ny fikitihana ny hetsika tadiavina.
Saingy afaka manao zavatra sarotra kokoa isika ary manolotra safidy bebe kokoa.. Raha mijery eo amina rohy ianao dia hahita ny fijerin'ny pejin-tranonkala. Raha mihisatra ianao izao, dia ho hitanao ny safidy hanokafana azy amin'ny takelaka vaovao na hanampy azy amin'ny lisitry ny famakiana. Na aiza na aiza no ahitanao sary mifandraika dia azonao atao ny manindry azy hampiseho ireo safidy hiantsoana azy, handefasana hafatra, mailaka, sns. Ary raha mijery mailaka amin'ny alàlan'ny Peek ianao, tsindrio ny lafiny iray mba hamafana azy na amin'ny lafiny iray hafa hanamarihana azy ho vakiana.
Ary mbola misy bebe kokoa
Vao nipoitra ny teknolojia 3D Touch, saingy efa manome fahafaha-manao betsaka. Izay rehetra nolazainay dia azontsika ampiana ohatra ny fahaizana manova ny klavier ho lasa trackpad amin'ny alàlan'ny fanindriana azy, na miditra amin'ny multitasking amin'ny alàlan'ny fanindriana amin'ny sisin'ny efijery. Hahazo kapoka hafa ihany koa isika rehefa mandoko amin'ny fampiharana Notes arakaraka ny tsindry ataontsika. Ary vao fanombohana ihany io, satria afaka miditra amin'ity haitao ity ny mpampiasa ary mampiasa azy amin'ny fampiharana azy. Nihevitra ve ianao fa efa nahafantatra ny fomba fiasan'ny iOS 9? Mandehana manova ny puce. Avelanay miaraka amin'ny horonan-tsary Apple ianao hahita izany rehetra izany miasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » 3D Touch, tonga amin'ny iOS 9 ny revolisiona
Satria tsy mitondra ny iPad Air 2. Kasika 3D
Ny horonantsary voalohany voarakitra miaraka amin'ny iPhone 6s ao amin'ny 4K dia navoaka
Efa fantatrao hoe ohatrinona ny RAM an'ny Apple TV 4: 2GB